Iingongoma ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokuThengwa kweKhamera ye-Worn-Worn | Izisombululo ze-OMG
Iingongoma ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokuThengwa kweKhamera ye-Worn-Worn
Iikhamera ezinxibe umzimba (BWC) ziye zaya kwithuba elincinci ukusuka kwirekhodi elula yeekhamera kuphela ukuya kwiikhamera ezibonelela ngomgangatho obonakalayo wokomgangatho kunye nokuqina. Ngokombono woluntu, iikhamera ezinxibe umzimba zikhulisa uxanduva nokucaca kwamapolisa kunye nonogada. Ukuziphatha kwabasebenzi kunye nokuziphatha kwamagosa kuyabonakala kuphucuka ngokulula kongezwa kwekhamera enxibe umzimba kwizixhobo zabo. Kwenzeka okufanayo nakumalungu oluntu; Izikhalazo nokuziphatha okukhubekisayo ngokuchasene namapolisa kunye nabasebenzi bezokhuseleko kunciphisa kakhulu kwiindawo apho umzimba unxibe i-cam ukhona.
Ukukhetha okuninzi kweekhamera ezikhoyo kwintengiso kunokwenza ukukhetha okona kubhidekisayo. Umthengi kufuneka azi kuqala ukuba zithini iimfuno zabo. Bafuna i-BWC yabahlali bezendlela, abasebenzi abangoonogada, oonogada, amagosa entolongo, kunye nabanye abasebenzi bexakeka njengabacimi bomlilo okanye abezimo eziphuthumayo. Kuba i -camera yecamera enokuthi isetyenziswe njengobungqina ngexesha lokuxoxwa kwetyala, iinkampani kufuneka ziqiniseke ukuba iimveliso zabo zilandela imigaqo eyahlukeneyo malunga nokugcina ukuthembeka kobungqina bedijithali. Kukho izinto eziqhelekileyo eziqhelekileyo zokuqinisekisa ukuthembeka kwedatha. Amanqanaba ogunyaziso ahlukeneyo aqinisekisa ukuba ipolisa elinxibe ikhamera alinayo indlela yokuphazamisa ividiyo, ukuyicima, okanye ukuyitshintsha.
umzekelo, Kwi-OMG umthetho wokunyanzeliswa kobungqina bokuKhuseleka kweMini eMncinci yeWomen Worn nge-Encryption [Nge-LCD Screen] (BWC060) inamanqanaba okugunyazisa:
Umsebenzisi uvumela ukurekhoda nje kwaye uphila ukusasaza, kodwa akukho kucinywa kwefayile okanye ukufikelela kwiifayile ezirekhodiweyo
Iividiyo ziya kufakwa kabini kwi-AES256 kunye ne-RSA2048. Uluntu aluyi kuba nakho ukufikelela kwiividiyo nangona ziyayaphula ikhamera. Ngabasebenzisi kuphela abaneRSA Private Key abanokujonga iividiyo
Nazi ezinye zeengongoma eziphambili ekufuneka uzigcine engqondweni ngaphambi kokuthenga ikhamera enxibe umzimba.
Iikhamera ezinxibe umzimba zixhotyiswe ngaphambi kokurekhoda kunye nerekhodi enamaqhosha okwenza ukuba zilungele ukusetyenziswa ngelixa amagosa asentsimini. Igosa kufuneka likwazi ukuyenza isebenze ngokulula i-cam kwimeko kaxakeka. Isixhobo kufuneka senze ukuba abasebenzisi bakwazi ukugcina nokugcina iividiyo ngokulula kuba ihlala iyinkqubo etya ixesha.
Ukunyaniseka kunye nokunyamezelana
Iikhamera ezinzima ngokungeyomfuneko zinokuchaphazela ukusebenza kokhuseleko kwaye zibathintele ekwenzeni umsebenzi wabo. Ewe, bafuna ukuba irekhodi labo libe lombhoxo kwaye liqine kodwa isisindo esigqithileyo singangumthwalo kumgca wentembeko. NjengeKhamera yokuNyanzela i-WIFI yoMthetho we-WIFI yoMzimba-Worn, ividiyo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM umbono wasebusuku (BWC052) unokunamathela ngokulula epokothweni okanye ngaphambili kwehempe ukurekhoda ngalo lonke ixesha eluntwini.
Ukulawula idatha erekhodwe yikhamera kubaluleke kakhulu. Kuba ubungakanani bonyawo luya kuba lukhulu; kunyanzelekile ukuba idatha kunye nokugcinwa kweedatha kube lula kwaye ilawuleke. Ukhuseleko olungaphambili kunye namagosa anyanzelisa umthetho axhomekeke kwiividiyo ukungqina ukuba benze ngokunyanzelekileyo okanye babambe abantu abenze ulwaphulo-mthetho. Ngesi sizathu, kufuneka babe nesixhobo ekulula ukusisebenzisa, esinokuthenjwa nesikhuselekileyo. Iimveliso zethu zinekhadi langaphakathi le-SD yokugcina indawo yedatha kunye nesitishi se-20 sokugcina idatha ukugcina idatha kunye nokukhulisa.
Ubungakanani kunye nokuthuthuzela
Ubunzima yinto ebalulekileyo xa kuziwa kukuthuthuzela kunye nobukhulu. Isixhobo esilula, esona sibhetele kulowo usinxibileyo. Nangona umsebenzisi kuya kufuneka alungelelanise ubunzima ngokuchasene neempawu, ubungakanani, kunye nokuqina. Iiarhente zokhuseleko azifuni ukuthenga ikhamera ephula ngokulula kwaye isixhobo kufuneka sibe nezixhobo ezifanelekileyo kunye nesoftware abayifunayo kwiimfuno zabo.
I-OMG Ukunyanzeliswa koMthetho weKhamera yeWallset yomzimba eValiweyo (BWC056) ikwaboniswe emfanekisweni kulula ukuyinxiba ngakumbi kwabo bafuna ukurekhoda nawuphi na umsebenzi wobomi bemihla ngemihla, namagosa ezokhuseleko anokubeka ngokulula entloko. Ikhamera ye-mini engasasebenziyo, iyaphatheka, ayinazithwali, kwaye kulula ukuyisebenzisa
Unxibelelwano lwe-WIFI kunye nolawulo lwe-APP
Zilungele amaxesha ahlukeneyo anjengetayi kubugcisa bepeyinti, ukupeyinta, ukupheka, ukuloba, ukulingelwa kweekhemikhali, njl njl. Inkxaso ye-max 64GB TF ikhadi lokuhlangabezana neemfuno zakho.
Iikhamera ezinxibe umzimba zihlala zisengozini kwimeko yendalo. Ikhamera yamapolisa kufuneka ikwazi ukumelana nayo nayiphi na imozulu embi kunye nemeko yokusingqongileyo kwindawo esebenza kuyo. Imvula, ikhephu kunye nezinye iimeko zemozulu zinokuchaphazela umgangatho wokurekhodwa, ke ngoko ukuthenga irekhoda yevidiyo esebenza kakuhle phantsi kwazo naziphi na iimeko kubalulekile. IQela lethu lamaPolisa eliGugileyo (BWC004) Ukuba nelensi ye-6G yeglasi-yokujonga ukukhanya, isisombululo esiyinyani sevidiyo se-FHD, kunye ne-IP67 engamanzi ene-140 ekwaziyo ukusebenza kwimvula, ikhephu kunye nezinye iimeko zemozulu.
Ubomi bebhetri ye-BWC kufuneka ivumele ikhamera ukuba isebenze lonke utshintsho ngaphandle kokuba iphinde yenziwe. Ikhamera ayiqhubeki ngokuqhubekayo kodwa endaweni yoko ivulwe ligosa njengoko kufunwa ngumgaqo-nkqubo wamapolisa. Ngokomndilili, igosa lirekhoda phakathi kweeyure ezimbini ukuya kwezintathu ngexesha lotshintsho lweeyure ezisibhozo. I-10- ukuya kwi-12 yeeyure eziguqukayo zifuna ubomi obude bebhetri, iimveliso zethu ezinobuninzi beeyure ze-16 zobomi bebhetri.
Indawo ethe tyaba yeBWC iphakathi kwe90 kunye ne-130 degrees. Iilensi ezibanzi ezibanzi zinokubamba ngaphezulu kwendawo ethile, kwaye zinike ulwazi ngakumbi kunesidingo. Iilensi ezibanzi zinokugcina imifanekiso enjalo engabonwa liliso leGosa leMoto yeWholeji yaManzi yeWomen HD, 12MP OV2710 140 Degree Camera, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Long Time Work (BWC053) yeyiphi iidigri ngaphezu kweekhamera eziqhelekileyo kwaye unike umfanekiso obanzi.
Iiarhente zokunyanzeliswa komthetho zenza imisebenzi yazo imini nobusuku; ke ngoko, bafuna umbono wobusuku. Nangona ezinye i-BWC ziza nokhetho lokujonga ebusuku, kukho ukunqongophala kwamanqanaba obubanzi kwaye akunakho ukwenza iimeko zemozulu ngeMini yaMagumbi oMzimba waMakhwenkwe, i-1296p, i-170Deg, i-12 Hours, i-GPS, ukubonwa ebusuku (BWC010) kunye nokunqongophala kwamanzi kuyahambelana kuzo zonke iimeko zemozulu.
Abasebenzisi bahlala besebenzisa ikhamera yomzimba yokhuseleko emva koko kufuneka bafune inkqubo ye-docking. Itekhnoloji le iyavela ukuvumela ukulayishwa kwevidiyo ebaleni, uninzi lwe-BWC luza njengenkqubo ebandakanya "isikhululo sedokodo." Izikhululo zokutshixiza zibiza iyunithi ye-BWC, kwaye iinkqubo zokuphelisa okuphezulu nazo zigqithisela okanye zalayisha urekhodo lwedijithali kumaseva okanye ukugcinwa kwelifu. Uninzi lweemodeli ze-BWC, igosa liya kubeka icandelo lekhamera kwisikhululo sedokodo xa libuyela kwisebe ukugqitywa kweshifti. Ukuba iiklip zevidiyo azikhange zahlulwa-hlulwa okanye zamakishwa, igosa okanye elinye ilungu lesebe lingakwenza oko okwangoku kwinkqubo. Sibonelela ngamazibuko ama-8, amazibuko e-10, amachweba e-12, amachweba e-20 kunye nezikhululo ze-8 zokugcina izikhululo zokumisa izikhululo zokubonisa kubathengi bethu.
Olunye uphando lusinika iindlela ezintathu ezenza ukuba ividiyo ingabonakali.
Iindlela ezintathu zokwandisa ukubonakala kwekhamera yomzimba
Abalawuli bamapolisa kufuneka baqinisekise ukuba amagosa abo ahambelana nemigaqo-nkqubo yesebe mayela nokusetyenziswa kweekhamera. Uninzi lwamasebe lugunyazisa ukuba amagosa asebenzise iikhamera zawo ngexesha lokudibana esidlangalaleni. Kodwa amazinga okuthobela ahlala ephantsi, ngamanye amagosa enza ukuba iikhamera zabo zibe ngaphantsi kwe-2 yepesenti yezehlo. Ngelixa ubuchwephetsha obutsha bunokuphucula ukuthotyelwa kwamagosa anjengeekhamera ezivula ngokuzenzekelayo xa kuthunyelwe iifowuni okanye izixhobo zitsaliwe amasebe kufuneka enze umsebenzi ongcono wokulandela umkhondo nokuwulungisa xa amagosa engalandeli imigaqo-nkqubo.
Amagosa kufuneka azise abantu abanxibelelana nabo xa iikhamera zabo zomzimba zirekhoda. Kumasebe amaninzi asebupoliseni, imigaqo-nkqubo iyacebisa kodwa ayigunyazisi ukuba amagosa axelele abahlali xa iikhamera zabo zenziwe zasebenza kunye nokurekhodwa. Ngenxa yoko, bambalwa abantu abakwaziyo iikhamera ngexesha lokudibana kwabo namapolisa.
Amasebe kufuneka asebenze ngokukhawuleza ukukhupha imifanekiso yeekhamera zomzimba ezivela kwiziganeko eziphezulu kunye nezinye izehlo xa kuceliwe. Kwindawo ezininzi, uluntu lunokufikelela kwimifanekiso ngokuvula izicelo zeerekhodi. Kodwa le nkqubo inokulibaziseka xa ividiyo iyinxalenye yophando oluqhubekayo okanye xa ineenkcukacha (njengobuso, iipleyiti zamaphepha-mvume, okanye ulwazi lwabucala) ekufuneka iphinde yenziwe ngaphambi kokuba ikhululwe.
Iikhamera ezinxibayo zijoyina iitekhnoloji ezininzi eziza kunceda bonke abasebenzi bexakeka ukuba basebenze ngokukhuselekileyo kwicandelo. Ngoku emva kweenkcukacha zenza izigqibo malunga neekhamera zomzimba kunye nezibonelelo zazo ezixhasayo kulula ukwamkela ezi zixhobo zintsha kunye nobuchule bokunxibelelana kwaye bandise kubasebenzi abangakumbi kwixa elizayo.
Ukugqwesa, PC f., Nd [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://pceinc.org/wp-content/uploads/2018/03/20180301-Police-Body-Worn-Cameras_What-Prosecutors-Need-to-Know-White-and-Case-and-PCE.pdf
IGogol, mna, i-2016 / 01 / 18. asmag.com. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.asmag.com/showpost/19727.aspx
ULawulo, E, i [Online]
Kufumaneka kwi: https://www.nccpsafety.org/assets/files/library/Handbook_for_Public_Safety_Officials-_Body_Camera_Program.pdf
UPeterson, B., Meyi 29, 2018. I-URBAN INSTITUTE. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.urban.org/urban-wire/three-ways-police-can-use-body-cameras-build-community-trust
Iimveliso, nd Ukunyanzeliswa komthetho kwe-OMG-Ikhamera yeWorn Worn (DVR / WIFI / 3G / 4G) / Ulawulo loBungqina beDijithali - eSwitzerland. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://omg-solutions.com/body-worn-camera/
Ukhuseleko, R., nd Ukhuseleko lweRewire. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.rewiresecurity.co.uk/blog/body-worn-camera-cctv-security
Iingongoma ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokuThengwa kweKhamera ye-Worn-Worn gqibela ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
4375 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-3 Namhlanje